News - Waa maxay Ubaxyada iyo Dhirtu waxay kaa caawinayaan inaad caafimaad qabtid
Si si wax ku ool ah loogu dhuuqo gaasaska waxyeellada u leh gudaha, cholrophytum waa ubaxyadii ugu horreeyay ee lagu kori karo guryaha cusub. Chlorophytum waxaa loo yaqaan "sifaynta" qolka, oo leh awood nuugid rasmi ah oo caadi ah.
Aloe waa warshad cagaaran oo dabiici ah qurxinta iyo nadiifinta deegaanka. Kaliya maahan sii deynta oksijiinta maalintii, laakiin sidoo kale waxay nuugtaa kaarboon laba ogsaydhka qolka habeenkii. Xaaladda iftiinka 24-saac, waxay baabiin kartaa formaldehyde ku jira hawada.
Agave, sansevieria iyo ubaxyo kale, waxay nuugi karaan in ka badan 80% gaasaska waxyeellada leh ee gudaha ku jira, sidoo kale waxay leeyihiin awood aad u nuugid ah 'formaldehyde'.
Cactus, sida echinocactus grusonii iyo ubaxyo kale, waxay nuugi karaan gaasaska sunta iyo waxyeelada leh ee ka dhasha qurxinta sida formaldehyde iyo ether, sidoo kale waxay nuugi karaan shucaaca kumbuyuutarka.
'' Cycas '' waa aqoonyahan ku habboon dhuuqa wasakhda benzene-ka ee gudaha, waxayna si wax ku ool ah ugu baabi'in kartaa formaldehyde roogagga, walxaha dahaarka leh, plywood, iyo xylene oo lagu qariyey waraaqaha derbiyada waxyeellada u leh kilyaha.
Spathiphyllum waxay soo saari kartaa gaaska qashinka gudaha, waxayna leedahay saameyn nadiifin gaar ah oo ku jirta Helium, benzene iyo formaldehyde. Xaddiga nadiifinta ozone-ka ayaa si gaar ah u sarreeya, oo lagu dhejiyo gaaska jikada, ayaa nadiifin kara hawada, ka saari kara dhadhanka karinta, laambadda madow iyo arrinta kacsan.
Intaa waxaa dheer, Rose wuxuu nuugi karaa gaasas waxyeello badan leh sida hydrogen sulfide, hydrogen fluoride, phenol, iyo ether. Daisy iyo Dieffenbachia waxay si wax ku ool ah uga saari karaan wasakheynta 'trifluoroethylene'. Chrysanthemum wuxuu awood u leeyahay inuu nuugo benzene iyo xylene, isagoo yareynaya wasakheynta benzene.
Beerista ubaxa gudaha waa inay doortaan noocyo iyadoo loo eegayo baahiyaha dhabta ah. Guud ahaan, waa inay raacdaa mabaadi'da sii deynta walxaha waxyeelada leh, dayactirka fudud, carafta nabadeed, iyo tirada ku habboon. Laakiin pls waa in la ogaadaa in kastoo ubaxyadu ay leeyihiin saameyn wanaagsan oo daahirinta hawada ah, sida ugu wanaagsan ee loo nadiifiyo hawadu waa in la xoojiyo hawo qaadashada iyo in la cusbooneysiiyo hawada gudaha.